Home Wararka Kenya: “Ciidankeennu Waxay ka Tirsan yihiin AMISOM” Ma baxayaan? akhriso
Kenya: “Ciidankeennu Waxay ka Tirsan yihiin AMISOM” Ma baxayaan? akhriso
Dad badan ayaa is weydiinaya sida uu saameyn karo khilaafkan diplomasiyadeed ee Kenya a ciidaka Kenya ee dalka ka howlgala. Haddaba Khilaaf Diplomaasiyadeed ka dhexeeyo Dowladaha Somalia iyo Kenya ayaa waxaa soo baxayo walaac ku aadan saamaynta uu Khilaafkaasi ku yeelan karo ciidamada Kenya ee ku sugan Somalia.
Mas’uul ka tirsan dowladda kenya ayaa yiri “Ciiddankeenna waxay ka shaqeynayaan Deegaan Khatar ah, wayna og yihiin sida ay naftooda u badbaadin karaan. Si katsaba ha ahaatee, Ciiddankeenna uma joogaan Somalia inay yihiin Ciiddan Kenyaan, balse waxay ka tirsan yihiin Taliska AMISOM”.
i khilaafkan loo xalliyo ayuu sheegay mas’uulkaas inay rajeynayaan ka deris ahaan in Arrinta lagu xaliyo bannaanka Maxkmaadda ICJ, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay taasi ka rajeynayaan DFS. Tan oo u muuqata dabin dhab ah oo loo dhigayo madaxda iyo dalka Somaliya waayo horay ayaa loogu xallin waayey arrinkaan wadahal.